SIDDEED Qodob Oo Lagu Kala Saarayo Waddamada Isku-dhibcaha & Isku Goolasha Ka Noqda Tartanka Euro 2020 - Laacib
HomeKulamada Caalamiga AhSIDDEED Qodob Oo Lagu Kala Saarayo Waddamada Isku-dhibcaha & Isku Goolasha Ka Noqda Tartanka Euro 2020
SIDDEED Qodob Oo Lagu Kala Saarayo Waddamada Isku-dhibcaha & Isku Goolasha Ka Noqda Tartanka Euro 2020
Tartanka qaramada Yurub ayaa caawa bilaabmaya, waxaana lagu furayaa labada waddan ee Talyaaniga iyo Turkey oo ku wada ciyaari doona garoonka Olimpico ee magaalada Rome, halkaas oo ay ka dhici doonto xaflad inta aanay ciyaartu bilaabmin.
Taageereyaasha kubadda cagta ee aan xogta badan ka haysanin tartankan, waxa aanu halkan ugu soo gudbinaynaa siddeed qodob oo sharciga UEFA ku yaalla, isla markaana loo adeegsado in lagu kala saaro waddamada wareegga hore ee Groups-ka ku dhamaysta iyagoo isku mid ka ah dhibcaha, sidoo kalena goolashoodu isku mid yihiin.
Sida uu dhigayo sharciga UEFA, haddii laba waddan ama ka badan ay isku dhibco ku dhamaystaan wareegga hormooyinka, waxa lagu kala saarayaa.
1. Tirada dhibcaha ay kala heleen kulamadii ay soo wada ciyaareen dalalka isku-dhibcaha ah.
2. Farqiga goolasha ee kulamadii ay soo wada ciyaareen waddamada isku dhibcaha ah
3. Goolasha ay soo dhaliyeen waddamada isku dhibcaha ah
4. Haddii qodobbada 1aad illaa saddexaad lagu kala saari kari waayo oo ay isku mid ka noqdaan, laakiin kooxaha isku group-ka ay jiraan kuwo ka dhibco duwan, waxa la isticmaalayaa qiimaynta UEFA ee kala-wanaaganaanta dalalka.
Waxa kale oo la isticmaalayaa
5. Farqiga goolasha group kasta
6. Goolasha la dhaliyey dhamaan kulamada group-ka
7. Gool ku-laad (rikoodhe) (laakiin kaliya ma aha duruufo khaas ah
8. Tirada kulamada ay badiyeen dhamaan kulamada group-ka.
9. Kooxaha ugu akhlaaqadda wanaagsan marxaladda hormooyinka ee haysta kaadhadhka ugu yar ayaa iyaguna mudnaan heli doona.